लिजलाई कायम हुने गरी पसल बेच्न सकिन्छ ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
लिजलाई कायम हुने गरी पसल बेच्न सकिन्छ ?
मैले ३ वर्षअघि एउटा पसल किनेको थिएँ । ल्याण्डलर्डबाट १० वर्षको लिज लिएको छु । अब ७ वर्षको लिज बाँकी छ । पसल विक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको छु । खरिद गर्ने एउटा ग्राहक पनि फेला परेको छ । अब मैले सोही लिजका आधारमा मेरो पसल सो खरिद गर्नेलाई बेच्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मेरो घर मालिकले अर्को नयाँ लिज नयाँ भाडावालाको नाममा बनाउने स्थितिमा छैन । अब कसरी यो पसल मैले अहिले मेरो भएको लिजलाई नै कायम हुने गरी पसल बेच्न सकिन्छ होला ? उत्तरका लागि धेरै आभारी हुनेछु ।
– श्रवण, अमेरिका
तपाईंको १० वर्षको लिज, अब ७ वर्षका लागि भ्यालिड छ । यो अवस्थामा यदि तपाईं पसल विक्री गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईंको ल्याण्डलर्डसँग यस विषयमा कुुरा गर्नु जरुरी हुनेछ । कारण लिजविना अर्काको घर तथा प्रोपर्टीमा पसल वा स्टोर राख्न वा चलाउन सकिने छैन । यदि बायरले तपाईंको स्टोर किन्न तयार छन् भने सो कुरा ल्याण्डलर्डलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ । ल्याण्डलर्डको स्वीकृतिविना तपाईंले सो लिजलाई बायरमा असाइन गर्न मिल्दैन । स्टोर विक्रीको अवस्थामा सो स्टोरको लिजसम्बन्धी व्यवस्था दुई किसिमले गर्न सकिन्छ– १) पुरानो एक्जिस्टिङ लिजलाई नयाँ बायरको नाममा असाइनमेन्ट अफ लिज गर्ने अर्थात् तपाईंको लिजमा रहेको अधिकार र कर्तव्यलाई नयाँ बायर वा नयाँ भाडावालामा ट्रान्सफर गर्ने, २) पुरानो वा एक्जिस्टिङ लिजलाई टर्मिनेट गरी नयाँ लिज, सो बायरको नाममा बनाउने । यो दुई वटा अप्सनका बारेमा तपाईंले पसलको विक्रीको डिल गर्नुअगावै ल्याण्डलर्डसँग कुराकानी गरेको हुनुपर्नेछ । ल्याण्डलर्डले यी दुई माथिको अप्सनहरुमा १ लाई पिक गर्न सक्नेछ । यदि असाइनमेन्टको अप्सनलाई उसले मानेको खण्डमा तपाईंले असाइनमेन्ट अफ लिजका लागि ल्याण्डलर्डबाट लिखित सहमति लिन जरुरी छ । तर, ल्याण्डलर्डले सहमति दिने प्रोसेसमा तपाईंको बायर वा नयाँ भाडावालाको ब्याकग्राउण्ड र क्रेडिट हिसेरी सबै चेक गर्नेछ र यदि उसलाई चित्त बुझेमा भाडामा दिनेछ । यदि ल्यण्डलर्डले लिज असाइनमेन्टका लागि भाडामा दिन नमानेमा वा स्वीकृति नदिएमा तपाईंले स्टोर विक्री गर्ने अवस्था नहुने हुन्छ । कारण, लिजविनाको स्टोर कुनै पनि बायरले किन्ने छैन र अर्को यदि तपाईंले ल्याण्डलर्डको स्वीकृतिबेगर स्टोर बेच्नु भइहाल्नुभयो भने पनि त्यसले तपाईंको लिजको टम्र्स अफ कन्डिसन्सको उल्लङ्घन हुन सक्नेछ । त्यस अवस्थामा अटोमेटिकल्ली तपाईंको लिज भ्वाइड हुन जानेछ । फलस्वरुप तपाईंको ल्याण्डलर्डले एभिक्सन प्रोसिडिङ तपाईंविरुद्ध कोर्टमा फायल गर्न सक्नेछ ।
अर्को परिस्थितिमा यदि ल्याण्डलर्डले सहमति दिएको खण्डमा आफ्नो लिजलाई नयाँ बायरको नाममा लिज असाइनमेन्ट गरी स्टोर विक्री गर्न सक्नुहुनेछ । तर, स्टोर विक्री गरे पनि नयाँ भाडावालाले रेन्ट नतिरेको खण्डमा ओरिजिनल लिजका आधारमा रेन्ट नन–पेमेन्टका लागि तपार्यं जिम्मेवार हुनुहुनेछ । अर्थात् नयाँ भाडावालाले भाडा नतिरेमा ल्याण्डलर्डले तपाईंबो सो नतिरेको भाडा असुलउपर गर्न सक्नेछ ।
यी माथिका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी ल्याण्डलर्डबाट स्वीकृति लिएर मात्र विक्रीका डिल फाइनालाइज गर्नुहोला । असाइनमेन्ट या लिजका कुरालाई अघि बढाउनका लागि तपाईंको लिजको टम्र्स अफ कन्डिसनहरुलाई पनि राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ ।